Prọfesọ John Whitehall - Dysphoria Na Ntanetị Nwa | KPỌỌ
Ndi nne na nna kparita uka banyere nchebe nke umu akwukwo
Transgender Reggha vidiyo Site na Ndị Silaghachi na Nightmares Transgender ha
Nke vidiyo Prọfesọ John Whitehall setịpụrụ na Dysphoria Childhood
Isiokwu ndị ọkachamara na Transgenderism
Walt Heyer - Transgender Rere
Mmemme ụlọ akwụkwọ dị mma
Nne na Nna.
Prọfesọ John Whitehall - Videosmụaka Dike nke nwoke di dysphoria.
Edepụtara ya Site Isiokwu.
Akọwapụta Dysphoria na Nwata
Dysphoria bụ nwata na Nsogbu Uche Alakụba
Nkụzi nwata nwoke na nwanyị Dysphoria & Mmekọahụ Mmekọahụ
Dysphoria nke Nwata dika nwata - Hormones & Sistemụ Limbic
Dysphoria bụ nwata na - enye ndụmọdụ ezinụlọ & ọgwụgwọ
Copyright 2018. Efu (Ngwakọta Ọlụlụ Na-eme Njọ Banyere Mmekọahụ Mmekọahụ) Group Group Advocacy Group. Ikike niile echekwabara